ကျွန်ုပ် အသိဥာဏ်တိုးပွားရသော နေ့ တစ်နေ့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်ုပ် အသိဥာဏ်တိုးပွားရသော နေ့ တစ်နေ့ 
ကျွန်ုပ် အသိဥာဏ်တိုးပွားရသော နေ့ တစ်နေ့ 
Posted by မောင် ပေ on Jul 7, 2011 in Creative Writing, Short Story | 12 comments
အများက “ကျွဲ” လို့ ဖတ်နေကြတဲ့ “ ဤ ” ကို ဝင်ပြောချင်တာ ဆိုတော့ နဲနဲတော့ လန့် တာပေါ့နော် ။ ဒါပေမယ့် လဲ ဘာဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး ဖတ်စရာ တစ်ခု တော့ ဖြစ်တန် ကောင်း ပါ ရဲ့ လေ ဆိုပြီး ရေးမယ်ဗျာ ။
ဒီလိုဗျ တစ်ရက် က
ကျုပ် ရွာထဲ မှာ တစ်ပို့ စ်ချင်း စီ ဖတ်နေတုန်း ၊ ချာတိတ် တစ်ယောက် က အံ့သြတကြီး ပြောလာတယ် ။
“ ကိုပေ လည်း ဒီဆိုက် ထဲ မှာ ဝင်ထားတာလား တဲ့ ”
ဒါနဲ့ခပ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြ လိုက်တော့
“ ကျွန်တော် လည်း အဲဆိုက့်မှာ ရက်ဂျစ်စတာ လုပ်ထားတယ် တဲ့ ”
ဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း ရွာသားချင်း တော့ ဆုံရပြီပေါ့ ။ အားရဝမ်းသာ နဲ့ 
“ မင်း က ဘာနာမည် နဲ့ လဲ ”
လို့ဆိုလိုက်တော့
“ နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ၊ ကြာပြီ ” တဲ့ ။
“ ဒါနဲ့ မင်း ပို့ စ်တွေ ဘာတွေ တင်ဖူးသလား လို့ မေးလိုက်တော့ ၊ တင်ဖူးတာပေါ့တဲ့ ၂ခု ၃ ခု လောက် တဲ့ ၊ ဒါနဲ့၊ ဒါဆို မင်း ဘာတွေ များ တင်ခဲ့တာလဲ လို့ မေးကြည့်တော့ ၊ ပို့ စ်တင်တာများ ဗျာ…ကိုယ့်မေးလ်ထဲ သူများ ပို့ ထားတဲ့ တစ်ခုခု ကို ခပ်တည်တည် နဲ့ တင်လိုက် ပြီးနေတဲ့ဟာ ပဲ ၊ တဲ့ ။ ခင်ဗျားကော ဘာတွေ ရိုက်နေတာလဲ တဲ့ ။ ကျွန်တော့် လို ကော်ပီ ကူး ပြီး ပေ့စ် လုပ်လိုက် ပြီးနေတဲ့ဟာ တဲ့ ၊ ဒါနဲ့ အော် ဘာရယ်ညာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ကွာ လို့ငါစဉ်းစားမိတဲ့ ဟာလေး ကို ဖတ်စရာအတိုလေး သဘောမျိုး ရေးကြည့်နေတာပါ လို့ဆိုလိုက်တော့ ခင်ဗျားနယ် ဗျာ ရှည်ရှည် ဝေးဝေး စဉ်းစားနေတယ် ၊ ကျွန်တော် အကြံပေးမယ် ဒီလိုလုပ် ၊ တဲ့ ၊ ဒါနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ ဟ ”
“ ဒီနည်းက နာမည်ကြီးဖို့ အရမ်းလွယ် အရမ်းမြန်တာနော် ။ သေချာမှတ်နော် ၊ ကျွန်တော် ပြောတဲ့အတိုင်း ခင်ဗျား လုပ်လို့ ခင်ဗျား နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော့် ကို့ မမေ့ရဘူးနော် ”
“ အေးပါကွာ ၊ မမေ့ပါဘူး …ကဲပါ ပြောကြည့်စမ်းပါဦး ” လို့ ဆိုလိုက်တော့
“ ခင်ဗျား အကြည်တော် ဘီလူး ဝတ္ထု ဖတ်ဖူးတယ်မလား ”
“ အေး ဖတ်ဖူးတယ် ”
“ ဒီလိုလုပ်လေ ၊ အကြည်တော် က ဘီလူး ဆိုပြီး ရေးထားတာကို ခင်ဗျား က သူရဲ ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ပေး ၊ ပြီးရင် ဘီလူး က ရွာမှာ ထန်းရည်မူးတာ တို့ သူကြီးသမီး ကို ကြိုက်တာ တို့ ၊ အင်းဂလိပ်တွေ ကို တော်လှန်တာတို့ ဘာတို့ ကို ခင်ဗျား က ဒီလို ပြန်ရေး ။ သူရဲ က ဘီအီးမူးတယ် ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး နဲ့ မတည့်ဘူး ။ ရပ်ကွက်လူကြီး ရဲ့ ကစ်ပင် ကို မရမက ကြံတယ် တို့ ၊ နောက်ပြီး ခင်ဗျား ဇါတ်ကောင် ကို တစ်ခုခု ကို တော်လှန်ခိုင်းလိုက်ဗျာ ၊ မဟုတ်ဘူးလား ။ ကဲ ဘယ်လောက် လွယ်သလဲ ။ ပို့ စ်တင်တာများ လွယ်လွန်းလို့ လွယ်လွယ်လွယ် နဲ့ တောင် ထအော်လိုက်ချင်သေး ”
သူ့ စကား အဆုံး ၊ ကျွန်ုပ် လည်း
“ ဟ ကောင်းလှချီလား ဟ မောင်ရင့် အကြံ က ၊ ဒါနဲ့ပြဿနာ တက်ခဲ့ရင်ကော ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ”
“ အာ ခင်ဗျား နှယ် ပိန်းတိန်းလိုက်တာ လွန်ရော ၊ လူ့ ပြည် က အပ်တစ်စင်း နဲ့ ဗြဟ္မာပြည့် က အပ်တစ်စင်း တွေ့ ဖို့ မလွယ်ပေ မယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူး နဲ့ တစ်ခြားလူတစ်ယောက် ရဲ့ စိတ်ကူး နဲ့ ကတော့ အမြဲ တိုက်ဆိုင် နိုင်ပါတယ် ပေါ့ ဗျာ ၊ ဥပမာ ဆိုရရင် တစ်ဦးက ထမင်းစားချင်စိတ် ပေါက်လာချိန်မှာ နောက်တစ်ဦး ကလဲ သူ့ ဘာသာသူ ထမင်းစားချင်စိတ် ပေါက်တာ ကို ခင်ဗျား တို့ ဘာပြဿနာ ရှာချင်တာလဲ ဘာလဲ နဲ့ခပ်တည်တည် ပြန်အော် လိုက်လေ ။ ဘာခက်တာ မှတ်လို့”
“ အေးကွာ ၊ ဟုတ်သား ပဲ ။ မင်း ပြောလိုက်တော့ လဲ ရှင်းနေတာပဲ ၊ ဟုတ်ပြီလေ ဒါဆို သေချာ မှတ်ထားလိုက်တော့မယ် ။ ဟုတ်ပြီလား ”
“ အောင်မယ် ဒီလို လွယ်လွယ်တော့ ဘယ်ရမလဲ ၊ ကျုပ်ပြောသလို ခင်ဗျား လုပ်မှာ ပါ သေချာပါတယ် ။ ဒီတော့…လာလာ ဘီယာလေးတော့ အရင်လိုက်တိုက် လိုက်ဦး ၊ ခင်ဗျား ရှင်းပြ ရတာ အာမောတယ် ။ လာလာ ” ဟု ဆိုကာ ကျွန်ုပ် လက် ကို ဇွတ်ဆွဲ ခေါ်နေသဖြင့် ကျွန်ုပ် သိရှိမိလိုက်သော အဖိုးတန် အကြောင်းအရာ များ ကို ရွာသူ ရွာသား များ အပျင်းပြေ ဖတ်ရန် အလို့ ငှါ တိုက်ပင်းလေး ရိုက် ၊ Publish လုပ်လိုက်ရပါကြောင်း ။
သြော် ရေးဖို့ တစ်ခု ကျန်ခဲ့လို့ 
အကြည်တော် ရဲ့ “ လူလည်ကြီးများရွာ ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး ကို ဖတ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်
သော်တာဆွေ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ “ ဘော့ပရစ်တီး ဝတ္ထုတိုများ ” စာအုပ် ထဲ က ပထမ ဆုံး ဝတ္ထုလေးနဲ့ ဇါတ်လမ်း များ မတူ ဘူးလား လို့။
လုပ်ကြပေါ့ ရှင့်တို့က ရဲတွေပဲ.. ဒီနှစ် အတွင်း ဆံပင်တွေ ပိုဖြူ လာသလား တွေးမိတယ်။
ခပ်ပေါပေါ စာအုပ်တွေ မဖတ်လို့ မသိလိုက်ဘူးတော်ကာရေ……… မင်းကတော့ မထသ ပဲ…။
ဆရာသုမောင် ဟောပြောပွဲ တစ်ခု မှာ ဟောခဲ့တာလေး ရှိတယ်ဗျ ။
ကျုပ်ရေးတာ နဲနဲ လွဲနေရင် ကျုပ် အပြစ်ပါနော် ကျုပ် အသုံးမကျလို့ ပါ လို့ ပြောကြပါ
ဆရာသုမောင် ဟောခဲ့တာလေး ကို အရမ်းကြိုက်လို့ ပြန်share ရရင်
` မောင် တို့ စာ ပေ ပေါင်းစုံ ဖတ်ကြပါ ၊ အယုတ်စွဆုံး မမြင်ကွယ်ရာ မှာ ဖတ်ရတဲ့ စာအုပ်တွေ ပါ ဖတ်ကြပါ ။ အဲ အရမ်းတော့….လိုက်မလုပ်ကြနဲ့ ပေါ့…..ကောင်းတာကိုယူ ၊ မကောင်းတာကို ပယ်ကြပါ ´ လို့ 
ဆရာသုမောင် က ဟောပြောပွဲ တစ်ခု မှာ ဟောခဲ့ဖူးပါတယ် ။
အသုံးချသင့် မချသင့် သာ စဉ်းစားချင့်ချိန် ရပေမည်။- လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
မိုးဟေကို ဘယ်လိုနာမည်ကြီးသွားလဲ သိတယ်နော်…….
သူ့ ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု ကို ပြောပါတယ်။
သူ့ ရဲ့ ဆန်းလဲပါတာပေါ့….
သူလို လိုက်တုကြပေမယ့် သူ့ကိုမမှီတာတွေ တော့ရှိတာပေါ့….
နံမည်ကြီးချင်တာတော. ကောင်းပါတယ်။ ကြိုးစားမှုတိုးတက်တာပေါ.
ဒါပေမဲ. အမေရိကန်သမ္မတ လင်ကွန်း ကိုသတ်ပြီး နံမည်ကြီးချင်တဲ. ပြဇာတ်မင်းသားလိုတော. လိုက်မလုပ်နဲ.
ဟုတ်တယ်..ဘော့ပရစ်တီး နဲ့တူတာ..။အကြည်တော်ကို သော်တာဆွေတို့ ကုသ တို့ လွှမ်းမိုး
လေ ပြော သူလေးရေ